အမျိုးသမီးအတွက်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ Clomid ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
1 ။ Clomid ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?2။ Clomid အသုံးပြုခြင်း
3 ။ Clomid သောက်သုံးသော4။ Clomid ရလဒ်များကို
5.Clomid တစ်ဝက်ဘဝ6။ Clomid ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
7 ။ Clomid အကျိုးကျေးဇူးများကို 8 ။ Clomid ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
9 ။ ရောင်းရန် Clomid 10 ။ females- (အကျဉ်းချုပ်) တွင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ Clomid
Clomid ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
ဆေးသောက် citrate လည်းခေါ် Clomid (50-41-9), အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအမျိုးအစားများကိုကုသအတှကျအသုံးပွုသောကာပါးစပ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကထိုကဲ့သို့သော Clomidac, clomene, Bemot, Clomi, et al clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်မှာစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှု USA တွင် 1967 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အကြံပြုခဲ့သည်။ တိုင်းကျန်းမာရေးစနစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အပေါ်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးများ '' စာရင်းထဲမှာအညီဒီအလုံခြုံဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးဆေးဝါးလိုအပ်နေပါသည်။ ဒါဟာယေဘုယျဆေးဝါးများအဖြစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ Clomid ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ oligo-မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့် anovulation ၏မထှနျးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်အများအပြားမျိုးဥထွက်သော induction အခြားနည်းလမ်းအကြားဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးတစ်လမ်းအတွက်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းဆောင်တာအီစရိုဂျင်၏အဆင့်ဆင့်နိမ့်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှမဟုတ်ရင် FSH လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်လူသိများဟော်မုန်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ luteinizing ဟော်မုန်း LH သို့မဟုတ် follicles မြှင့်တင်ရန်အတွက် pituitary gland ကိုဖြစ်စေသည်။ ဓာတ်လှေကား FSH အဆင့်ဆင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြက်ဥ follicles ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်မျိုးဥထွက်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်လုပ်ရှိသည်ဖို့အတွက်သားဥအိမ်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မြင့်မား LH အဆင့်ဆင့်မျိုးဥထွက်လှုံ့ဆော်ခြင်း။
Clomid (50-41-9သူတို့အပိုဆောင်းအထူးပြုစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်မွေးဖွားအထူးကုစစ်ဆေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရည်ညွှန်းမတိုင်မီ) ငါးဆယ်ကျော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများသမားနှစ်သို့မဟုတ် OB-GYNs များအတွက်သညျဟုထငျ oldsters အကြားတစ်ဦးကောင်းစွာ-ကြိုက်တယ်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လေ့ဆေးသောက် citrate သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ တချို့က General အထူးကုလည်းဆေးသောက် citrate စည်းကြပ်။ ဤသည်ဆေးသည်အဘယ်သူ၏သားဥအိမ်စနစ်တကျ (မူလတန်း pituitary သို့မဟုတ်လိင်ဂလင်းပျက်ကွက်) ကြက်ဥကိုမဖန်တီးမင်းသမီးများအတွက်အကြံပေးသည်မဟုတ်။
Annular ဇီဝကမ္မပြည်နယ်, အလုပ်မဖြစ်သွေးထွက်, amenorrhea, အလယ်တန်း amenorrhea, gonadotrophic ၏နှောင့်အယှက်များဖော်ထုတ် Post-တားဆေး amenorrheas, galactorrhoea, polycystic သားဥအိမ်၏ syndrome ရောဂါ, Chiari-Frommel ဒေနာ, Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းမလုံလောက်, oligospermatism, ထို endocrine ဂလင်း၏လည်ပတ်။ ဆေးသောက် citrate မကြာခဏအောက်ပါပြဿနာများကိုမဆိုရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတိုက်တွန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်သည်:
မမှန်မျိုးဥထွက်: ကသူမ ovulating ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကသူမသေချာသောမဖွစျနိုငျ သို့ဖြစ်. မညီမညာဖြစ်နေသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့သံသရာဧရိယာယူနစ်တစ်ကြိမ်ပဋိသန္ဓေ ယူ. မှဒုက္ခပါပဲ။ ထိရောက်သောပြီးတာနဲ့ဆေးသောက် citrate ၏အသုံးချပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ် Intrauterine သုက်အဘို့အခွင့်တစ်ခုသေချာ ovulatory တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်သင့်၏။
"အမျိုးသား Factor" ကလေးမွေးဖွားပြဿနာများကို: အရည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်တခါ, ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာ Practitioner ဇီဝကမ္မအခြေအနေအလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ Intrauterine သုက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက် citrate မကြာခဏအမျိုးသမီး၏သံသရာနှင့်အတူသုက်၏ယာယီအစီအစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နေသားတကျပါပဲ။
Unexplained မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း: ဆေးသောက် citrate conjointly သို့သော်နေဆဲဧရိယာယူနစ်ကိုယ်ဝန်ရယူလုပ်ရတဲ့ရှိခြင်း, တစ်ဦးကိုအကုန်အစင်ရိုးရာမွေးဖွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြကြောင်းကျန်းမာနုပျိုစုံတွဲများအတွက်ဇီဝကမ္မအခွအေနေနှုန်းထားများတိုးမြှင့်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတိုင်းအသစ်ကကုသမှုသံသရာမတိုင်မီမည်သည့်အရေးပါကျန်နေတဲ့လိင်ဂလင်းပျတိုးဖယ်ဖို့ AN ultrasound စာမေးပွဲဖျော်ဖြေဖို့အကြံပေးမဟုတ်ပါဘူး။
Clomifene conjointly သူတို့အားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏အောင်မြင်မှုနှုန်းချဲ့ထွင်ဖို့မတူညီတဲ့မော်တာ-ကူညီ General နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပြီး
Clomifene ပုံမှန်အားအန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းအစားထိုးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန်နောက်ထပ်အဖြစ် eunuchoidism ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သောက်သုံးသောပုံစံ: ဆေးလုံး ndc 0068-0226-30: 50 သုံးဆယ်၏ပုံးအတွက် Tablet MG
tablets, အဖြူ, ယူနစ်အလင်းဆုံ၌ရှိကြ၏သွင်းယူနှင့်ဆေးသောက် citrate ငါးဆယ် debussed ။
ထိန်းချုပ်ထားအပူချိန် 59-86 ° F ကိုမှာ Store ကတက်ဘလက် (15-30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ။ အပူ, အလင်းနှင့်အလွန်အကျွံ wetness နှင့်ပိတ်ထားသောကွန်တိန်နာအတွင်းစတိုးဆိုင်ကနေကာကှယျ။
ဆေးသောက် citrate ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ workup နှင့်ကုသမှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးသို့မဟုတ် endocrine မမှန်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဟောင်းကိုဆေးသမားတို့ကကြီးကြပ်ခံရဖို့သင့်၏။ လူနာတွေဆေးသောက် citrate တစ်ခုတည်းကိုသာရသောအခါသတိထားအဖြေရှာတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဘို့ရွေးကောက်ခံရဖို့သင့်၏။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏အစီအစဉ်ကြိုတင်ပုံနှိပ်ခံရဖို့သင့်၏။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ပန်းတိုင်မှအဆီးအတားဆေးသောက် citrate မစတင်မီဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်လုံလောက်စွာကုသရပါမည်။ အဆိုပါကုထုံးရည်မှန်းချက်အလားအလာအန္တရာယ်များနှင့်အတူဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနှင့်လူနာ et al နှင့်အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့ခံရဖို့သင့်၏။ တစ်ဦးဇီဝကမ္မအခွအေနေ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွင်းသက်ဆိုင်ရာ။
ရွေးကောက်တော်မူသောလူနာများ၏ကုသမှုငါးရက်များအတွက်, အတူနေ့စဉ်ကော်ဖီထိုး, ငါးဆယ်မီလီဂရမ် (1 တက်ဘလက်) ကိုစတင်ရန်, သင့်၏။ အဆိုပါသောက်သုံးသောကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီသိသိငါးဆယ်မီလီဂရမ်ဆေးသောက် citrate တုံ့ပြန်ထုတ်ရန်ပါဘူးသူတွေကိုလူနာအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာချဲ့ကားပြောဆိုမှုများခံရဖို့သင့်၏။ အဆိုပါ pituitary ဟော်မုန်းမှအစွန်းရောက် sensitivity ကို polycystic Ovary syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူနာလိုပဲသံသယရှိလျှင်တစ်ဦးကကော်ဖီအစဉျအမွဲအရေအတွက်သို့မဟုတ်အရှည်ကုသမှုသင်တန်းအထူးသဖြင့်အကြံပေးသည်။
အဆိုပါလူနာတိုင်းကုသမှုသံသရာအကြားဇီဝကမ္မအခြေအနေလိင်ဂလင်းပျတိုး, ဒါမှမဟုတ် cyst ဖွဲ့စည်းရေးထုတ်ပယ်ဖို့ fastidiously အကဲဖြတ်ခံရဖို့သင့်၏။
progestin-သွေးဆောင်သွေးထွက်စီစဉ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အမျိုးသမီးပြည်တွင်းရေးမျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါသွေးလွန်ဆေးကုသမှုမတိုင်မီဖြစ်ပျက်မှန်လျှင်, ငါးရက်များအတွက်နေ့စဉ်ငါးဆယ်မီလီဂရမ်၏အစီအစဉ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးခံရဖို့်၏သို့မဟုတ်သံသရာ၏ပဉ်စမနေ့နှင့်စပ်လျဉ်း။ အကယ်. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းစိတ်ရှည်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအဘယ်သူမျှမမကြာသေးမီအမျိုးသမီးပြည်တွင်းရေးမျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါသွေးလွန်ရှိခဲ့ပါတယ်အတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဖြစ်စဉ်ကိုဒီထိုးမှာဖြစ်ပျက်ပြီးတာနဲ့မရှိအားသာချက်ကုသမှုသံသရာဆက်ခံအတွက်ဆေးထိုးတိုးမြှင့်ဖို့ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ဖြစ်စဉ်ကိုဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှု၏အဓိကသင်တန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့မထင်ပါဘူးဆိုရင်, ငါးရက်များအတွက်နေ့စဉ်တရာ (နှစ်ခုငါးဆယ်မီလီဂရမ်ဆေးပြားတဦးတည်းကိုနေ့စဉ်ထိုးအဖြစ်ပေးထားကြသည်) ၏ဒုတိယသင်တန်းညှတျသငျ့သညျ။ ယခင်တစျခုတကြိမ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဧရိယာယူနစ်သားဖွား၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖယ်ထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားတစ်ချိန်ကဒီသင်တန်းလည်းအဖြစ်အစောပိုင်းရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအဖြစ်စတင်နိုင်ပါတယ်။ တရာမီလီဂရမ် / နေ့ငါးရက်များအတွက်ဝေးဘက်မှာဆေးကုသမှု၏ဆေးထိုးသို့မဟုတ်ကာလတိုးမြှင့်အကြံပေးသည်မဟုတ်။
ဘယ်တုန်းကမှစွန်မှလူနာအများစုမှာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီဧရိယာယူနစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှု၏အဓိကသင်တန်းတစ်ကြိမ်, အရှင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဖြစ်စဉ်ကိုဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုသုံးခုသင်တန်းများတခါပေါ်ပေါက်မပါဘူးဆိုရင်, ဆေးသောက် citrate နှင့်အတူအပိုဆောင်းကုသမှုအကြံပေးသည်မဟုတ်လည်းလူနာ reevaluated ခံရဖို့သင့်၏။ သုံး ovulatory တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နေလျှင်, သို့သော်သားဖွားအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, အပိုဆောင်းကုသမှုအကြံပြုသည်မဟုတ်။
ဆေးသောက် citrate အလီလီ (အမွှာသို့မဟုတ်သုံးမွှာပူး ... တစ်ခါတစ်ရံထက်ပို) ရတဲ့သင့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ, မျိုးစုံကြက်ဥရိနာစွဲစေပါတယ်ကတည်းကတက်တတ်၏။ တွဲဖက်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ကလေးမွေးဖွားအထူးကုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့ Operating မှန်ကန်သောထိုး Higher-အလို့ငှာအလီလီ၏အခွင့်အလမ်း minimize လုပ်ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
IVF အကောင်းဆုံးမိခင် / ကလေးရလဒ်များအဘို့သားဖွားနှုန်းကလေးအရေအတွက်ကန့်သတ်ဘို့အခြား technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကအော်ဂဲနစ်ဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကပါဝင်ပတ်သက်သည့်အခါ, ဆေးသောက် citrate မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအသုံးပြုမိန်းကလေးများအကြမ်းဖျင်း eightieth အတွက်ရင့်ကျက်ကြက်ဥရိနာစွဲမှဦးဆောင်အနိုင်ရနေသည်။
မကြာသေးမီကသင်ဆေးသောက် citrate ရပ်ဆိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီသင်ရုံသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးတစ်ချိန်ကကျွမ်းကျင်မှုရှိနေဆဲဟုရှုထောင့်နေ့ရက်ကာလအဘို့သက်ရောက်မှု (သို့မဟုတ်ယူဆရရက်သတ္တပတ်) ငှါအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရှိနေဆဲဟုရှုထောင့်ဆိုးကျိုးများဆေးသောက် citrate နှင့်၎င်း၏ metabolites နေဆဲကြောင့်ဖျက်သိမ်းရဲ့သို့သော်ရှည်လျားရှေ့၌သင်တို့စနစ်နှင့်အံ့ဩအတွက်ဖြစ်သင့်သည်ဟုသံသယရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်တာရှည်ဆေးသောက် citrate ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့နိုင်ရန်အတွက်ဆက်လက်တည်ရှိသွားကြည့်ဖို့, ကငါးမှခုနစ်ရက်ပေါင်း၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်ပါပဲ။
ဒီငါးခုနစ်နေ့ဖျက်သိမ်းရေး Clomid ဝက်ဘဝ ကစောင်ရေကနေဆေးသောက် citrate ဆေးထိုး၏ငါးရာစေ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်ဗိုလ်လုပွဲထိုးတစ်ချိန်ကအပြည့်အဝတပတ်နီးပါးတက်ယူမယ့်ရဲ့ဆိုလို။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးကတည်းကရက်သတ္တပတ်ရဲ့ဆိုသော်ငြား - ကြောင်းဆေးသောက် citrate ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝကိုသိရှိ, သင်ကသင့်ရဲ့ system ကိုဆဲမယ့်ကြောင်းကိုသင်၏ထင်ကြေးအတွက်မှန်ကန်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, ကလုံးဝသင့် system ကနေဆေးသောက် citrate ပပျောက်ဖို့နှစ်ဆယ်အကြား seven.5 နှင့် 38.5 ရက်ပေါင်းယူပါလိမ့်မယ်; အကြောင်းကိုလေးယောက်မှခြောက်ပတ်က
အခွားသောအစီရင်ခံစာများ Clomid ရဲ့ထက်ဝက်-ဘဝဆေးသောက် citrate သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးတစ်ချိန်ကအထိတကျိပ်တပါးသောပတ်သင့် system အတွက်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ, ဆိုလိုတာကအကြောင်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်း (14 ရက်ပေါင်း), ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများကဆေးသောက် citrate သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကုသမှုတစ်ကြိမ်တစ်ဦးနှင့်သုံးလအကြားလှည့်ပတ်နေမျှော်လင့်ထားသင့်၏။ ဆေးသောက် (~ 62%) နှင့် zuclomiphene (~ 38%): ဒါဟာဆေးသောက် citrate မျိုးစုံ isomers ၏ဖွဲ့စည်းကြောင်းသတိပြုသင့်၏။
အဆိုပါ zuclomiphene ဓာတုဒြပ်ပေါင်း၏သိသိသာသာပိုရှည်ဖြစ်ပါသည်သော်လည်းအဆိုပါဆေးသောက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ဖျက်သိမ်းရေးဝက်အသက်, နှစ်ဆယ်လေးနာရီမှာ Calculator ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ zuclomiphene အစိတ်အပိုင်း Clomid ရဲ့ဖျက်သိမ်းရေး၏တိုးချဲ့သက်တမ်းအတွက်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းအဆိုပါဆေးသောက်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဖျက်သိမ်းမဟုတ်တဦးတည်းရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Zuclomiphene ပမာဏထက်ဝက်တစ်ဒါဇင်ရက်သတ္တပတ်တစ်ချိန်ကမစင်ကြယ်သောမစင်အစီရင်ခံကြသည်ကိုကောင်းစွာဆေးသောက် citrate နိဂုံးပိုင်း၏တစ်လတစ်ကြိမ် plasma အတွင်းပုံရသည်နှင့်ခြေရာကောက်
ဆေးသောက်တစ်ချိန်ကအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏နောက်ဆုံးထိုးလေးတကျိပ်တပါးရက်သတ္တပတ်တစ်ယုတ်အဘို့အစောင်ရေ၌တည်သော်လည်း, အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအရှိန်အဟုန်မှာမူးယစ်ဆေးပပျောက်နိုင်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများကိုနေတုန်းပဲခြောက်ပတ်အတွင်းတစ်ချိန်ကပလာစမာစောင်ရေအတွက် zuclomiphene ရှိသင့်သော်လည်း enclomiphene နှင့် zuclomiphene, (အတွင်းပေမယ့်ခြောက်ပတ်အတွင်း) ပျမ်းမျှထက်မြန် isomers ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးသောက်၏ဖျက်သိမ်းရေးမြန်နှုန်းအတွက် Inter-တစ်ဦးချင်းစီမူကွဲထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီအချက်များ, သောက်သုံးသောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးသက်တမ်းအဖြစ် variable တွေကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။
နှစ်ဦးကမင်းသမီး, တစ်ချိန်တည်းမှာစောစောကသူတို့ menial ကြောင်သံသရာ၌ငါးရက်ဆက်တိုက် 50 မီလီဂရမ်ဆေးသောက်သုံးစွဲပေလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာတဦးတည်းအသုံးပြုသူပိုမိုမြန်ဆန်အခြားထက်မူးယစ်ဆေးပပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သတစ်ဦးချင်းစီ '' ခန္ဓာကိုယ်အစှမျးသတ်တိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခြားသူများမူးယစ်ဆေးတိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမြုံလိမ့်မည်နေစဉ်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကြာကြာအဘို့အတက်ကြွနေဖို့နိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာပေဆေးသောက်အထူးကြပ်မတ်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဇီဝြဖစ်ခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ယင်း၏ဇီဝြဖစ်အဘို့အဖြေအတိအကျကိုပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလမ်းကြောင်း elucidated ကြသည်မဟုတ်သော်လည်းတစ်ဦးပြင်းထန်အခန်းကဏ္ဍယုံကြည်သည့်ချန်နယ်တစ်ခု CYP2D6 (cytochrome P450 2D6) ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများလျှင်မအပေါင်းတို့၏အများစုသင်အသုံးပြုနိုင်ပုံကိုပေါ် မူတည်. မိမိတို့၏လက္ခဏာနှင့်သူတို့၏, အားနည်းချက်တွေရှိသည်။ ဥပမာ, အလွဲသုံးစား, ဒါမှမဟုတ် overdosed လျှင်, Clomid ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုအကွာအဝေးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာအသုံးပြုသူများအထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ရှိပါတယ် Clomid ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အရာပုံမှန်ဖြစ်ကြပြီးအချိန်တိုအတွင်းအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ထက်မြင့်မားဆေးညွှန်းယူသည့်အခါအခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပိုမိုဒီတော့အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပေလိမ့်မည်။ ပါဝင်သည် Clomid အသုံးပြုသူများသည်အကြားဘုံဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုး;
သားအိမ် Hyperstimulation Syndrome
သို့သော်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သာသင်မူးယစ်ဆေးယူပုံကိုပေါ် မူတည်. ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ပြောင်းပြန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကအစသင်က Clomid ယူပြီးပြီးနောက်တွေ့ကြုံခံစားရာ၏သိသာထင်ရှားသောပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကသူတို့ကသတ်မှတ်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဆေးညွှန်းယူလျှင်ပင်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းသူတို့ကဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးခင်ဆေးစစ်ခံယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြံပေးဒါကြောင့်ပါပဲ။ အမှု၌သင်တို့သည်ဤဆိုးကျိုးများမဆိုတွေ့ကြုံခံစား, သင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာအံ့သောငှါသင့်သည်,
သင်တို့သည်လည်းအမှုအရာကမှားသွားလျှင်, Clomid မျိုးစုံကိုယ်ဝန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မမှတ်သားသင့်တယ်။ ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်အမွှာနှင့်သင်သုံးမွှာပူးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအမိန့်အရလိမ့်မည်ဟုတစ် 7% အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်အကြောင်းကို 0.5% နှင့်အတူကိုယ်ဝန်ရနိုင်မယ့်မြင့်မားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်စကားပြောအန္တရာယ်ဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်တို့ကိုလည်းအမွှာသို့မဟုတ်အကွိမျမြားစှာသယ်ဆောင်ရန်မထိုက်မတန်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်းပညာရှိဖြစ်၏။ သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျရဖို့အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကအနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံယူဖို့ပညာရှိဖြစ်၏။
Clomid အသုံးမပြုခင်, သင်က၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများမဆိုနဲ့မတညျ့သို့မဟုတ် hypersensitive မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာပါစေ။ သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်စကားပြောသင်သုံးစွဲဖို့မထိုက်မတန်ရှိမရှိအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုသငျသညျကွကုနျအံ့နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်း, ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဆိုရတဲ့၏အန္တရာယ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ချပြီးရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်အကြံပြုသောက်သုံးသောကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာပါစေ။
မှန်ကန်စွာဒီထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါကရန် hypersensitive မဟုတ်သောမိန်းမတို့အဘို့, မျှော်လင့်ထားရန်အလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ စဉ်အတွင်းနှင့်အများဆုံးပျော်မွေ့ရန်သင့်အဘို့သင့် Clomid သောက်သုံးသောပြီးသွားပြီးနောက်, သငျသညျရှေ့တျော၌သင်၏ဆရာဝန်ပါဝင်သေချာအောင်လုပ်ပါ Clomid အကျိုးကျေးဇူးများကို. Clomid အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သောအသုံးပြုသူများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း;
ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် - ဒီမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုကုသ၏အများဆုံးတတ်နိုင်နည်းလမ်းများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော IVF ကဲ့သို့သောအခြားအစီအမံနှိုင်းယှဉ် Clomid ၏ကုန်ကျစရိတ်ဆုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသက်ကို-ချွေတာပေမယ့်ရန်ပုံငွေပြတ်လပ်မှုကြောင့်မရှိခြင်းကုသမှုအဖြစ်ရောက်လေပြီ။ အသုံးပြုသူများအနေရကြောင်းအဆိုပါရလာဒ်များသုံးစွဲပိုက်ဆံ၏တန်ဖိုးကိုကျော်လွန်။
ဒါဟာတစ်ဦးပါးစပ်ဆေးဖြစ်ပါသည် - ခံတွင်းဆေးအတော်လေးလွယ်ကူသည်နှင့်နိမ့်ဆုံးနာကျင်မှုမှာပါရှိပါတယ်။ ဤသည်စူပါထိုးဖောက်ဖြစ်နိုင်သည့်အသုံးပြုသူများကိုအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျော်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ထားရန်ရှိသည်ဘယ်မှာထိုး, မတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Clomid ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများမှအမြိုးသမီးမြားကိုကယ်တင်သောအနည်းငယ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကမူလတန်းစောင့်ရှောက်သူများကသတ်မှတ်နိုင်သည် - သတငျးကောငျးသင်တစ်ဦး Clomid ဆေးညွှန်းအရတစ်ဦးမျိုးဆက်ပွားအထူးကုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အနီးကိုမဆိုမျိုးဆက်ပွားအထူးကု၏မသိရပါဘူးအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, အဆင်ပြေပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်ချွေတာဖြစ်ပြီး, အကောင်းဆုံးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင်အသုံးပြုမှု၏အကြံပြုလမျးညှနျခကိုလိုက်နာပေးသုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကြွလာ - မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခဲ့လျှင်မူကား, Clomid မျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ရခဲ့လျှင်, ထိုသူတို့အသုံးပြုမှုပျစဲပြီးနောက်သို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သက်ရောက်မှုဖို့အသုံးပြုရရှိပြီးနောက်ခဏသွားဦးမည်သာပျော့သူများဖြစ်ကြ၏။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုကောင်း Clomid ရလဒ်များကိုများအတွက်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်ရကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ပေးသွင်းထံမှမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဝယ်ဖို့သတိရပါ.
ဒီထုတ်ကုန်မတိုင်မီအသုံးပြုခဲ့ကြသောသူတို့ထံမှများစွာသောအပြုသဘောဆောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အသုံးပြုသောသူတို့၏တစ်ဦးကအများကြီးသူတို့အစာရှောင်တွေ့ကြုံသူကပြောပါတယ် Clomid ရလဒ်များကို, သူတို့ထုတ်ကုန်၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုဖို့တုံ့ပြန်ပုံကိုတအံ့တသြခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးအများစုကအခြားသူများကိုမမှန်သံသရာရတဲ့ခဲ့ကြသည်များနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မရနိုင်နေချိန်တွင်သူတို့ကာလလွဲချော်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီစိတ်ကူးဆေးဝါးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူသည်အထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ထဲကအများစုဟာအသုံးပြုမှုကိုအပြီးသုံးလအတွင်းရလဒ်များကိုတယ်။
သူတို့ထဲကတစ်ဦးအနည်းငယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, ဝမ်းလျှောခြင်း, အန်၏ညည်းညူပေမယ့်တကယ်သူတို့ကမူးယစ်ဆေးအပေါ် overdosed နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသူတို့အသုံးပြုမှု rectified ညာဘက်အပြီးရပ်တန့်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါသောသူတို့၏အမျိုးအပါဆုံး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Clomid နဲ့မကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံရှိခြင်း၏တိုင်ကြားသူအသုံးပြုသူအများစုသူတို့တစ်တွေဆေးစစ်ခံယူခြင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးသုံးဝန်ခံကြပါပြီ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများထံမှရောထွေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုအရတစ်ဦးဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် Clomid အမျိုးသမီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုကိုကုသများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသင်ကတစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးရဲ့ကတည်းကပုံမှန်ထိုးခံရဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သောက်သုံးသောသာသုံးလအကြာကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့သတင်းပို့နေတဲ့တိုတောင်းသောကာလအတွင်း၌ရလဒ်များကိုကြုံနေရလည်းစတင်ပါ။
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ testosterone decanoate ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်(အသစ်တစ်ခုကို browser tab မှာဖွင့်လှစ်)
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သင်ညွှန်းပေးအပ်တော်မူကြောင်းကို, အဲဒါကိုကြိုးစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ခံစားနေရဖို့ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လမ်းလာကိုပထမဦးဆုံးရောင်းချသူထံမှဝယ်ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်နှင့်ကြီးမားသောအမှားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Clomid ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်ဆိုပါက, သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချကနေရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သတိထားရှိရမည် Clomid ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း သငျတို့သလိမ်လည်သူများကို '' ထောင်ချောက်ထဲမှာလဲကျမ။ ပေးသွင်းတက်လာမယ့်ကရောင်းဖို့ဟုဆိုကာ၏နံပါတ်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်သည့်ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုတိုးလာဝယ်လိုအား, ရှိခဲ့သည်။ သငျသညျအလုံအလောက်သတိမထားဘူးဆိုရငျ, သင်ရှာနေသောရလာဒ်များကိုမပေးနိုငျသောအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်သင်၏ငွေအများကြီးဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျငှါ Clomid အမှုန့်ကိုဝယ် ကြောင်းသင်ပြီးသားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်ထက်ပိုဆိုးဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်နာကျင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သောစားသုံးမှုများအတွက်လုံခြုံဘူး။
သင်၏အချိန် ယူ. သင်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုငျသော Clomid ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေပါ။ Clomid အွန်လိုင်းဝယ်ယူသင်လက်ျာတစျခုအရနျလိုအပျကွောငျးထိတွေ့မှုပေးသည်။ အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Check နှင့်အထူးသဖြင့်ရောင်းချသူထံမှထုတ်ကုန်ဝယ်ယူကြသူအခြားလူထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျသငျတို့ရှေ့ဒီထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုကြပါပြီသိသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများထံမှအကြံပြုချက်များနှင့်သူတို့ကိုသင်သည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရည်ညွှန်းကြကုန်အံ့လည်းလို့ရတယ်။ ရှာဖွေနေသည့်အခါကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရောင်းရန် Clomid သင့်ရဲ့အာမခံအစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးမဟုတ်လျှင်။ သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရခွင့်ပြုပေမယ့်အစားအချို့သုတေသနပြုပျမ်းမျှစျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုနားလညျပွီးအမြားဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူရောင်းချသူဘို့မသွားသင့်ပါတယ်။
ဆေးတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း, သင်အစွမ်းကုန်လေးနှင့်အတူကပြုမူဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လမ်းလာပေမယ့်အစား, အရည်အသွေးရှာသောပထမဦးဆုံးမြှင့်တင်ရေးသို့အဆောတလျင်မထားပါနဲ့။ သတငျးကောငျးကိုကျနော်တို့လက်ရှိတွင်ဒေသအတွက်အကောင်းဆုံး Clomid ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အမိန့်အောင်နိုင်ပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့၏အိမ်တံခါးပေါ်တွင်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများမှာလည်းအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်တတ်နိုင် အမြောက်အများအတွက် Clomid ဝယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေက်ဘ်ဆိုက်ကနေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျမေးခွန်းများသို့မဟုတ်သင့်အမိန့်အောင်အတွက်အကူအညီလိုခေါ်ဆိုမှုအချိန်မရွေးပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုခလိုင်းများပွင့်လင်း 24 /7ဖြစ်ကြသည်။
females- (အကျဉ်းချုပ်) တွင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ Clomid
Clomid ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးမွေးဖွားပြဿနာများ၏ကုသမှုမှကြွလာသောအခါစူပါထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသူရဲ့အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ပြန်လာအတွက် pituitary gland follicles လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းများ၏အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ကိုသူတို့တကယ်ရှိပါတယ်ထက်နိမ့်ဖြစ်ကြောင်းထင်အောင်တို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ဦး Ovum သို့မဟုတ်ဝင်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် Ovary လှုံ့ဆော်, နှင့်အသုံးပြုသူထို့နောက်မျိုးဥထွက်နေစဉ်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ (ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နိယာမဖြစ်တယ်, မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ျာ Clomid အဘို့အကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုယူတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏တွေအများကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ထားပါတယ်50-41-9) နှင့်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်သည်မည်သည့်မွေးဖွား-related ပြဿနာများကြုံနေရနေတယ်ဆိုရင်, ဒီထုတ်ကုန်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားရလဒ်ကိုခံစားပါ။
သို့သျောလညျးသငျသညျအမြင့်ဆုံးရလဒ်အတွက်တပြင်လုံးကိုသောက်သုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သင်၏ဆရာဝန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာသေချာပါစေ။ သင်သည်မည်သည့်အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလျှင်သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးရဲ့ပစ္စည်းမှမတည့်လျှင်သင့်ရဲ့ဆေးမှူးတအကြောင်းကြားရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ ထိုနည်းတူစွာပင်အဆိုပါအခွအေနေပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့မီပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရမှု၌သင်၏အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခေါ်ပါ။
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, အက်စ်, Zoungas, အက်စ်, & Boyle, ဂျေ (2015) ။ polycystic Ovary syndrome ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသမီးကလေးမွေးဖွားကုသမှုမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့: ကြီးမားတဲ့လူထုအခြေပြုဆောင်များတွင်လေ့လာမှုကနေဒေတာ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ကနျြးမာရေးဂျာနယ်, 24(4), 299-307 ။
Berger, MH, Messore, အမ်, Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016) ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းမှ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 4(4), 353-365 ။